अस्टुरियसका सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू, ओभिडोबाट Absolut यात्रा
दानियल | | ओभिडो
अस्टुरियस यसमा 427२XNUMX किलोमिटरको तटरेखा छ जसमा केन्ट्याब्रियनका केही अति सुन्दर कुनामा लुकाइएको छ। यस पोष्टमा हामी तपाईंलाई अस्टुरियसमा सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू जुन तपाईं रियासतको राजधानीबाट पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। ओभिडो.
स्पेनका अन्य पर्यटन क्षेत्रहरू जस्तो छैन अस्टुरियन तट भीडभाड नहुने र विजिट गर्नेलाई रमाईलो गर्ने सम्भावना प्रदान गर्ने गर्व गर्न सक्छ असाधारण प्रकृति। यसको समुद्री तटहरू विशेष रूपले ती पर्यटकहरूका लागि आकर्षक छन् जुन गुणस्तर बिदाको लागि उत्सुक छन् महान् सौन्दर्यको प्राकृतिक तटबाट घेरेको।
यो सत्य हो कि ओभिडोको कुनै तट छैन, तर यो धेरै नजिक छ। शहरबाट यो धेरै अद्भुत समुद्री किनारहरू पहुँच गर्न धेरै सजिलो छ, या त कार द्वारा वा सार्वजनिक यातायात द्वारा। समस्या त्यहाँ भइरहेको छैन, तर कुन गन्तव्य छनौट गर्न।
कुन हो अस्टुरियसमा सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू? उत्तर तार्किक रूपमा व्यक्तिपरक मापदण्डको विषय हो, तर हामीले तल उद्धृत गर्न लागेका सबै प्रायः सबै सूचिहरूमा देखा पर्दछ:
1 Andrín बीच, Llanes
2 टोरम्बिया समुद्र तट, Llanes
3 सिलेन्सिओ बीच, कुडिलरो
4 रोडिल्स बीच, विलाभिसिओसा
5 भेगा बीच, बार्बेस
6 एस्पसा बीच, कोलुंगा
Andrín बीच, Llanes
ओभिडोबाट करीव kilometers ० किलोमिटर अवस्थित, Andrín बीचमा चट्टानहरू र सेता बालुवाको एक सुन्दर परिदृश्य प्रदान गर्दछ जुन उच्च चट्टानहरूको बीचमा लुकेको छ। भाग हुनुहोस् पूर्वी तट संरक्षित परिदृश्य.
बलौटे क्षेत्रको अनुमानित विस्तार २240० मिटर छ र यसको अगाडि पट्टि छ बलोटाको टापु। यो निकट देखिन्छ, तर यसमा पौडी खेल्न प्रयास गर्नु उचित हुँदैन, किनभने समुद्रको छेउमा जहिले पनि शक्तिशाली धारहरू छन् जुन समुद्र तटबाट अलग गर्दछ।
Andrín समुद्र तट को सबै भन्दा सुन्दर छवि बाट प्राप्त गरीएको छ बोरिजा दृष्टिकोण, चट्टानको शीर्षमा।
टोरम्बिया, अस्टुरियसको सबैभन्दा प्रसिद्ध न्युडिस्ट समुद्र तटहरू मध्ये एक हो
साथै, Llanes मा, अर्को शानदार समुद्र तट हाम्रो प्रतीक्षा छ कि निस्सन्देह अस्टुरियसको सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरूको सूचीमा समावेश हुनुपर्दछ। ब्यारो र निम्ब्रो नगरपालिकाको नजिक, आधा किलोमिटरको यो सुनौलो बलौटे क्षेत्र आधा चन्द्रमाको आकारमा छ र यो आधारभूत सेवाहरु संग सुसज्जित छ।
टोरम्बिया सबैभन्दा प्रसिद्ध हो नग्न तटहरू स्पेनको उत्तरी तटबाट। हुनुको तथ्य ठूला चट्टानहरूको बीचमा बसाइएको, आँखा चिम्लेदेखि टाढा, यो त्यहाँ नग्नता र प्रकृतिलाई प्रेम गर्ने आकर्षित भयो।
प्लेआ डेल सिलेन्सिओ, अस्थायी तटको सब भन्दा सुन्दर कुनामा एक।
को सुन्दर फिशिंग गाउँको भ्रमण कुडिलेरो (मध्येको एउटा अस्टुरियसको सबैभन्दा सुन्दर शहरहरू) Playa del Silencio मार्फत जानु बिना पूर्ण हुनेछैन। त्यहाँ लगभग meters०० मिटरको बाटो छ जुन सडकबाट पानीमा जान्छ। तर यस प्रयासलाई लायक छ अस्टुरियसको सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरूको आनन्द लिन।
समुद्री किनार आफै चट्टानको फेदमा बालुवाको साँघुरो भाग हो। केही वर्ष पहिले एक्लो ग्रह Playa del Silencio (पनि भनिन्छ Gavieiru) उत्तरी स्पेन मा भ्रमण को लागी तपाइँको उत्तम स्थानहरूको सूचीमा।
रोडलेस समुद्र तट विलाभिसिओसा मुहानमा अवस्थित छ
ओभिडोको नजिक पनि (केवल kilometers० किलोमिटर टाढा), लामो र शानदार रोडिल्स बीच छ। यो सीमा को सीमा भित्र छ R Villaa Villaviciosa प्राकृतिक रिजर्व।
क्यान्टाब्रियन समुद्री किनारको हावामा पर्दा यो समुद्र तट हो सर्फरहरूको साथ धेरै लोकप्रिय, जो त्यहाँ यसको तरंगहरू भेट्न आउँछन्।
भेगा बीच, बार्बेस
शानदार Playa de Vega
दर्शनीय सुन्दरता र निस्सन्देह अस्टुरियसको सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरूको एक जंगली बलुई क्षेत्र। ला भेगा समुद्र तट Oviedo बाट करीव 80० किलोमिटर अवस्थित छ। तटको तन्चा जहाँ यो अवस्थित छ को मान भेगा र एन्ट्रीपेस प्राकृतिक स्मारक.
यस समुद्र तट को परिदृश्य को उपस्थिति द्वारा विशेषता छ उच्च टिब्बा र ठूला छालहरू। एकदम पृथक भएको बावजुद, पहुँच अपेक्षाकृत सजिलो छ। टोरिम्बिया समुद्री किनारका साथ, यो न्यूडिस्टहरूको लागि धेरै लोकप्रिय गन्तव्य हो।
एस्पसा बीच, कोलुंगा
La एस्पसा बीच यो वास्तवमा एक डबल समुद्र तट हो। यो दुई बालुवा क्षेत्रहरूको मिलन द्वारा गठन गरिएको हो: एल भिसो र मोरासी। दुबै कम्तिमा एक किलोमिटर भन्दा लामो लम्बाइमा थप गर्दछ। यसको बालुवा सुनौलो छ र यसको छालहरू सामान्य मध्यम हुन्छ।
यस समुद्री किनारमा अभाव नभएको हावाचाहिँ हो, जुन बर्षभरि चलिरहन्छ। मेमा, स्पेनभरिका धेरै प्रशंसकहरू राम्रोसँग भाग लिन त्यहाँ भेला हुन्छन्। चite्गा महोत्सव। यस घटनाले यस भव्य समुद्री किनारको आकाश र colors्गले भर्दछ।
गुलपियुरीको अनुपम समुद्र तट
हाम्रो सूचीको अन्तिम टचको रूपमा, विरलै: समुद्र बिना समुद्री तट। वास्तविकतामा, पानी समुद्री किनारबाट भित्री भाग सम्म पुग्छ भुईंमा जग्गाबाट हुँदै। तब यो समुद्री तटबाट एक निश्चित दूरीमा देखा पर्दछ, समुद्रको बीचबाट पृथक समुद्र किनारमा हुने विचित्र संवेदना प्रदान गर्दछ।
यसको विशेष सुविधाहरूको लागि धन्यवाद, गुलपियुरी समुद्र तट हालसालैका वर्षहरूमा प्रसिद्ध पर्यटकहरूको आकर्षण भएको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » अस्टुरियसका सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू, ओभिडोबाट
स्विस चकलेटको इतिहास